Casper – Gold Channel Movies
Casper (1995) မြန်မာစာတမ်းထိုး
ဒီဇာတ်ကားလေးမှာတော့…ဒေါက်တာဟာဗေးဟာ တစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့ ခရီးတွေသွားရင်း သရဲခြောက်တယ်လို့ နာမည်ဆိုးနဲ့ကျော်ကြားတဲ့နေရာတွေမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေ ဘဝကူးပြောင်းနိုင်ဖို့ လိုက်လံကူညီပေးပါတယ်တဲ့ ဒီလိုလိုက်လံကူညီပေးတဲ့နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရင်းက ဘာများဖြစ်နေမလဲ?
မိခင်ဆုံးပါးပြီးနောက် အဖေတစ်ခု သမီးတစ်ခုမို့ သူ့ရဲ့သမီးလေး ကတ် ဟာလည်း အဖေဖြစ်သူသွားရာနောက် တကောက်ကောက်လိုက်ရပါလေရော ဒီလိုနဲ့ ဝပ်စတက်လို့ခေါ်တဲ့ အိမ်ကြီးဆီရောက်သွားပြီးနောက် ခင်မင်ဖို့ကောင်းတဲ့ သရဲလေး ကတ်စပါ….. အမြဲတစေလိုက်နှောက်ယှက်ပြီး လူတွေကိုခြောက်လန့်တတ်တဲ့ သရဲသုံးကောင်တို့နဲ့ ဘယ်လိုတွေ ထိပ်တိုက်တွေ့ရမလဲ?
ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့သာမကပဲ သေဆုံးပြီးဘဝတွေထိပါ ဘယ်လိုလုံခြုံနွေးထွေးမှုတွေကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်မလဲ? ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဇာတ်ဝင်ခန်း.. ရယ်ရမောရ အံသြရတဲ့ခံစားချက်တွေကို ပေးစွမ်းနိုင်မယ့် ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။
Genre :Drama/ Comedy/fantasty
Run Time :1H 40min
Size : 720MB / 310MB
Translated & Reviewed by Ei Thinzar Jue
IMDb Rating 6.1 102,891 votes
TMDb Rating 6.21956 votes
Download Mediafire SD မြန်မာ 310mb 3046months gcmovies
Download Mediafire HD မြန်မာ 720mb 5036months gcmovies
Download Openload SD မြန်မာ 310mb 5636months gcmovies
Download Openload HD မြန်မာ 720mb 14196months gcmovies
Htet Rati KyawDecember 23, 2018Reply
kyaehtiteDecember 23, 2018Reply